« Maloya nomade » : hampahafantatra ny Saodaj’ ny IFM | NewsMada
« Maloya nomade » : hampahafantatra ny Saodaj’ ny IFM
Mampahafantatra zava-baovao hatrany ny Institut français de Madagascar (IFM) eo amin’ny tontolon’ny hira sy mozika, amin’ny alalan’ny fanafarana sy fanomezana sehatra mpanakanto avy any ivelany. Ho vahininy, ny zoma hariva izao, ny tarika Saodaj’, avy atsy amin’ny Nosy La Réunion.
Tarika anisan’ireo nitondra rivo-baovao sy manaraka ny fivoaran’ny toetrandro eo amin’ny gadona maloya ny Saodaj’. Raha ny fantatra, samy sangany sy manana traikefa matevina ireo mpikambana dimy mianadahy mandrafitra ny tarika.
Ambara fa « maloya nomade » na tsy mijanona amina toerana iray fa mandehaleha ny mozika lalaovin’izy ireo, izany hoe, ahitana taratra ny kolontsaina sy ny kanto tamin’ireo toerana lalovany. Tsy mitsaha-mikaroka ny tarika.
Fa ankoatra ny mozika, azo lazaina ho mampivondrona ireo Nosy aty amin’ny ranomasimbe Indianina ny Saodaj’. Ity tarika ity no anisan’ireo vitsivitsy mihira amin’ny teny kreola, frantsay, malagasy ary anglisy. Hira noforonin’i Marie Lanfroy, anisan’ireo mpikambana nanorina ny tarika.
Araka izany, heverina fa tsy ho sarotra amin’ny mpankafy mozika eto amintsika ny hiditra tanteraka ao anatin’ny aingam-panahin’ny Saodaj’, amin’io fampisehoana io. Fiakarana an-tsehatra izay tafiditra ao anatin’ny « Indian ocean tour 2016 » na fitetezana ny ranomasimbe Indianina amin’ity taona ity.